Ukushisa Okuphezulu Khulu 99% i-Alumina Al2O3 Ishidi le-Ceramic China Manufacturer
Jinghui Industry Ltd. [Hunan,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:ISO9001, FDA Incazelo:Ishidi le-Ceramic Alumina,Ishidi le-Thin Alumina Ceramic,I-Al2O3 Ishidi le-Ceramic
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > Ukushisa Okuphezulu Khulu 99% i-Alumina Al2O3 Ishidi le-Ceramic
I-Model No.: JH.CS.004
Izici eziyinhloko zeshidi le-alumina ceramic:
1. Ukumelana kokushaqeka okushisayo okuhle, okungaphezulu kwe-220 T (℃) ngaphansi kokushisa okushesha nokupholisa
2. Ukuhanjiswa okuphezulu kokushisa okuyi-99% i-alumina, kuze kufike ku-24 W / mk ku-25 ℃, Kufanelekile ukufakwa kwesicelo sokushisa
3. Ukuqina kobuso obuhle, noma ngabe isicaba esikhulu seshidi lobumba ngobukhulu sibe ngu-0,05mm ngemuva kokugaya ngokunemba
4. Amandla we-dielectric ephezulu, ukulahleka okuphansi kwe-dielectric njalo nokulahleka kwesifo. Kuyinto ekahle yokufayilwa ukufakwa.
5. Ukuzisika kwe-laser noma ukusika ngobunono kwemishini kwenza ukubekezelela kuqinise.
Ukucaciswa kwamashidi e-ceramic
● Izinto ezibonakalayo zitholakala: i-alumina engama-99%, ama-99% ama-alumina, ama-99,5% i-alumina, i-zirconia, i-silicon nitride, i-silicon carbide ngokuzithandela
● Ubukhulu: ubude be mbali . I-500mm x 600mm , ukuqina kungaba ngu-0.15mm kuya ku-20mm
● Ukwelashwa okungaphezulu: Umhlaba omnandi, idayimane - kufane ne-Ra0.05, Metallization, Glazed
Ukuchazwa kwamashidi e-alumina ceramic
Besilokhu senza ama-alumina (Aluminium oxide, Al2O3) amashidi we-ceramic iminyaka engaphezu kwengu-15 ngaphansi kokulawulwa kwekhwalithi eqinile ngezinsimbi ezikhethiwe zokuhlanzeka eziphakeme ezisuka ku-95% ziye ku-99.8%.
Onke lawa makhishithi e-alumina anikezela ngezakhiwo ezingavamile zokufakelwa kukagesi, ukuhambisa okushisayo, amandla aphukile kanye nokumelana nokushisa okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, enye yezakhiwo ezihlukile ukubukeka kwayo okuphezulu okuphezulu kube yi-Ra0.2 okuholela ekuqinisweni okuhle kakhulu okunamathela ngefilimu emincane nokuqina kwefilimu ngenxa yezinhlayiya ezinhle, nakho kungadlala indima ebaluleke kakhulu kwinqubo yokona esebenza njenge i-alumina setha ceramic.
Izindlela ezijwayelekile zokwakha esizisebenzisayo zifaka i- tape-casting, isostatic Pressing, drying Pressing. Sisebenzelana nokukhethwa okuhlukahlukene kobukhulu kusuka osayizi abancane kuya kokukhulu ngosayizi. Ngezinhlobo zethu ezibanzi zokuhlinzekela izisetshenziswa, sinamandla okusuka kumaphrotheni wokukhiqizwa ngobuningi ngesikhathi esifushane.
★ Iminyaka eyi-10+ yesipiliyoni sokukhiqiza ku-OEM, ODM ……………………………. Inamandla iR & D, amandla okwenza umkhiqizo
★ In-house izinhlobo zokwenziwa ezinhlobonhlobo zamathuluzi ........ ★ Uhlelo oluqinile lwekhwalithi nezinqubo
★ Ezidlula zangaphambi yokuthengisa emva-sales service ................................... ★ nihlala wonke ama-oda njengoba into yokuqala
Q2: Ingabe uthumela isampula ukuze ihlole?
A: Impela, isampula likhululekile futhi nezimpahla ziqoqwa.
A: Sihlala sisekela amashidi ezenziwe ngobumba owenziwe ngokwezinto zokwakha ezahlukahlukene, ubukhulu, kanye nemiklamo.
A: Yebo, sibuye sikhiqize nobumba bezinsimbi ezenziwe ngobumba, amashubhu e-ceramic, i-zirconia ceramic element, izindikimba zokwethulwa kwezindwangu zokubumba, izindwangu zokubumba.
I-Washer Culic Insulating Washer ehlelwe ngokwezifiso
Ukushisa okuphezulu kokushisa okuhambisana nokushisa kwe-ceramic plate
95 alumina ceramic lokushisa usinki
Ceramic ipuleti ezishisayo ku-aluminium oxide ceramics
Yenza ipuleti eyenziwe ngokwezifiso 95% 99% 99,5% Alumina Ceramic
I-substrate kagesi ka-alumina ceramic
I-Reflexory High Purity Alumina Ceramic Lining Tile
High Ukuqina nangokuvikela 96% 99% Al2O3 bobumba Plates
Ishidi le-Thin Alumina Ceramic
I-Al2O3 Ishidi le-Ceramic
Ishidi le-Ceramic leMachin
I-Ceramic Alumina Rods
Isakhi se-Ceramic Metallized
Ishidi le-Ceramic Alumina Ishidi le-Thin Alumina Ceramic I-Al2O3 Ishidi le-Ceramic Ibha ye-Ceramic Alumina Ishidi le-Ceramic leMachin I-Ceramic Alumina Rods I-Ceramic Alumina Substrate Isakhi se-Ceramic Metallized